- Failed State definition, from wiki copied and pasted. *A failed state isapolitical body that has disintegrated toapoint where basic conditions and resp...
23 နာရီ ၅၅မိနစ် -
မွေးနေ့ရှင် မိန်းကလေး (မြင့်သန်း) - ဟိုး … ၊ အမှောင်တွင်း တစ်နေရာဆီက၊ အရောင်ပြယ်နေတဲ့ သစ်ရွက်ခြောက်အရောင်မျိုး၊ လည်စည်းနဲ့ အဘိုးကြီးတစ်ယောက်က “ဒါပေတဲ့ မင်းအနေနဲ့ သေသေချာချာ စဉ်းစားကွဲ့၊ နတ်သမ...
House physician reinstates mask mandate amid Delta variant spread in the US - CNN - 1. House physician reinstates mask mandate amid Delta variant spread in the US CNN 2. CDC guidance fallout: House, White House bring back mas...
ဦးဝင်းမြင့် နဲ့ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ဗိုလ်ချုပ် မှုးကြီး ဟောင်းသန်းရွှေ အားတွေ့ခွင့်တောင်းခံ ထား - သမတ ဦးဝင်းမြင့် နဲ့ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် တို့ နှစ်ဦး ဟာ မြန်မာ စစ်ခေါင်းဆောင်ဟောင်း ဗိုလ်ချုပ်မှုးကြီး သန်းရွှေ နဲ့တွေ့ ခွင့်တောင်းခံ ထားသော် လည်း...